मृत या जिवीत | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! मृत या जिवीत | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
यो NetEnt संचालित स्लट अमेरिकी जंगली पश्चिम मा 20 औं शताब्दीको सुरु वरिपरि समय तपाईं हुनेछ. खेल जस्तै बच्चाहरु बिली र यिशैको जेम्स रूपमा outlaws चाहन्थे थिए कि युग मा ठाँउ लिन्छ मृत या जिवीत. अत्यधिक इनामदायी स्लट मा प्ले गर्न सकिँदैन स्लट फोन जम्मा क्यासिनो.
मृत वा जीवित को विकासकर्ता बारेमा
NetEnt मा स्थापित भएको थियो 1996 र यो भन्दा बढी विकसित छ 200 विभिन्न विषयवस्तुहरू मा क्यासिनो खेल. यो स्लट अर्को उच्च गुणवत्ता खेल मा खेल्न उपलब्ध छ जो कम्पनी द्वारा विकसित गरिएको छ स्लट फोन जम्मा क्यासिनो.
यो पाँच रील र नौ payline स्लट जो मा प्ले गर्न सकिँदैन छ स्लट फोन जम्मा क्यासिनो 9p देखि £ 18 एक स्पिन. खेल जंगली पश्चिम युग देखि भारी ड्र र तपाईं दृश्य को सबै प्रकार देख्ने र अव्यवस्थित उमेर देखि सुनिन्छ. को रील एक काठ बोर्ड भित्र निश्चित तपाईंले एउटा सानो सहरमा मार्फत आउन सक्छ. कि बोर्ड मा, तपाईं गोलीले गरेको चाहन्थे पोस्टर को तस्वीर साथै प्वालहरू एक महाविद्यालय हेर्न. बाट नियमित कार्ड प्रतिमा 10 ऐस गर्न तल्लो मूल्य प्रतीक हो. उच्च मूल्य प्रतीक एक व्हिस्की शट छन्, दस-गैलन टोपी, एक शेरिफ ब्याज, यसको holster र चरवाहे जूता भित्र एक बन्दूक. जंगली खाजी पोस्टर र क्रस pistols प्रतिमा को एक जोडी मुख्य सुविधा ट्रिगर जो खेलको स्क्याटर प्रतीक हो.
को को बोनस सुविधा स्लट फोन जम्मा क्यासिनो खेल हो:
फ्री Spins- तपाईंले तीन वा बढि स्क्याटर प्रतीक को भूमि भने यो सुविधा रूपबाट. तपाईं संग पुरस्कृत गर्दै 12 निःशुल्क spins र2पटक गुणक. राउन्ड एक ढिलो सुरु सुरु तर चाँडै रूपान्तरणहरूलाई धेरै आकर्षक गोल मा. सुविधा समयमा मुलुकमा जो जंगली प्रत्येक एक टाँसिएको जंगली मा उत्तेजित गर्दछ र सुविधा समाप्त सम्म स्थिति बन्द रह्छ. सुविधा तिनीहरूलाई प्रत्येक एक फरक फरार समावेश पाँच अलग चाहन्थे पोस्टर आउँछ. तपाईं सुविधा समयमा पाँच रील प्रत्येक मा एक चाहन्थे पोस्टर लैंडिंग लागि पाँच अतिरिक्त निःशुल्क spins प्रदान गर्दै. सुविधा पनि अवतरण द्वारा retriggered गर्न सकिन्छ3वा बढी छरिन्छ.
यो स्लट फोन जम्मा क्यासिनो खेल मात्र छ9paylines तर WINS paylines को एक उच्च नम्बर संग कुनै पनि अन्य स्लट बढी आकर्षक छन्.